Momba anay - orinasa Fitaovana milina MEIXIN
Fitaovana milina MEIXIN
Meixin Comb Brush Making Machine Mpanamboatra, orinasa izahay dia orinasa teknolojia natsangana tamin'ny 2004.We dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, fivoarana ary fanamboarana milina vita amin'ny boriborintany vita amin'ny boribory 2-5 (tokana) (CNC), milina sy milina fanoratana CNC, CNC milina fidiovana kapila roapolo loha milina, milina fanamboarana borosy, milina fanendahana boribory, borosin-drihitra sy milina fanoratana, toy izany. Ny vokatrao dia ampiharina be dia be amin'ny borosy isan-andro isan-karazany, ny nify herinaratra, ny borosy nivezivezy, ny makiazy, ny borosy, ny borosy, ny borosy borosy, ny andiany volon-doha, ny volo vita amin'ny boribory, ny borosy vita volo, ny boribory vita amin'ny boribory. indostrian'ny fanamboarana sns .. Afaka manao ny milina isika araka ny takian'ny mpanjifa.
Manana vondrona fampandrosoana ara-teknika sady za-draharaha izahay.
Vonona ny hamolavola sy hamorona vokatra miaraka amina fepetra manokana mahazatra izy ireo. Ankehitriny, manana teknolojia fanamboarana milina famoronana milina isika, fahaiza-manao famoronana matanjaka, ary manatsara ny rafitra serivisy izahay.
Famokarana milina borosy sy kapa
Masinina borosy mihodina vita amin'ny MEIXIN manamboatra PZ- 22
Ny mpanjifanay dia avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ao ny India, Vietnamese, Venezoelà, faritr'i Taiwan, Amerika Atsimo sy ny sisa. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ny laharam-pahamehantsika No.1 dia ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.Navita nanao betsaka izahay hampiakarana ambaratonga kalitao ary miezaka handrafitra rafitra tsara sy manome antoka tsara.
Masinina lakana Hockey vita amin'ny MEIXIN nanamboatra PZ-16
Ny tranokay dia mandrakotra milina isan-karazany ary malaza be mpitia mpanjifa manana fisehoana eo amin'ny solosaina, ny balizan'ny TBI voafetra lalana manitsy sy làlan-dàlana fitaterana lalamby, motera servo, Italia motera motera sy ny sisa on.Ny vokatra rehetra dia tsy maintsy zahana 100% ahafahana miantoka azy ireo fampiasa, fahatokisana, fiarovana ary maharitra mandritra ny fandefasana.
Plastika misy poakaty vita amin'ny plastika
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2017 dia vita am-pahombiazana ny lamina voalohany amin'ny milina braking avy amin'ny mpanjifantsika Pakistan. Mandeha amin'ny fitaterana izy io. Hentitra ilay fonosana raha ny fampisehoan-tsary manaraka ireto dia mampanantena ny azo antoka milina.
Matoky anao ny famokarana milina brasily matihanina Meixin, manompo anao izahay.